Rooble oo Ciidanka faray inay xeryahooda ku laabtaan | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo Ciidanka faray inay xeryahooda ku laabtaan
Rooble ayaa uga mahadceliyay Farmaajo inuu kusoo wareejiyay fulinta qorshaha doorashadda iyo amaanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib markii shalay uu Farmaajo awoodda ku wareejiyay, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa amar ku siiyay Ciidanka dhufeysyada ka qotay xaafado kamid ah Muqdisho inay dib ugu laabtaan saldhigyadooda.
Wuxuu Rooble sheegay inuu aad uga xunyahay qalalaasihii ka dhacay Muqdisho ee sababay khasaare, barakac iyo walwal soo food saaray shacabka Soomaaliyeed, isagoo arintaasi ku tilmaamay inay ahayd nasiib darro aad u weyn oo lagabaaqsan karay oo ay tahay in aysan mar kale nagu soo laaban.
"Dhammaan Ciidammada Qaranka ee geesiyada ah, waa difaaceyaasha qaranka, mana laha mucaarad iyo muxaafad, sidaasdarteed waxaan farayaa in ay xeryahooda kunoqdaan kana fogaadaan in ay ku milmaanarrimaha siyaasadda," ayuu yiri Rooble.
Rooble ayaa sidoo kale xusay in si loo dhameeyo saameynta siyaasadda ku yeelatay Ciidanka uu magacaabayo gudi ka shaqeeya soo afjaridda kala qeybsanaanta askarta oo mucaaradka qaar la safan, qaarna dowladda u dagaalamaya.
Ugu dambeyn, wuxuu Rooble ugu baaqey siyaasiyiinta mucaaradka inay joojiyaan hadallada xanafta leh ee dhaawacaya nabada, xasiloonida iyo wadajirka Shacabka Soomaaliyeed, isagoo ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah.